यस्तो थियो धरहरा ढलेको डरलाग्दो दृश्य – MySansar
यस्तो थियो धरहरा ढलेको डरलाग्दो दृश्य
Posted on July 31, 2015 July 31, 2015 by Salokya
वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै सबैभन्दा बढी फैलिएको खबर थियो- काठमाडौँको धरहरा ढल्यो रे। कतिले त विश्वासै गरेनन्। भूकम्पलगत्तै फोटो खिच्न र समाचार स‌ंकलन गर्न हिँडेको मलाई भने धरहरा ढलेको थाहै थिएन। रत्नपार्कमा दरबार हाइस्कूल भत्किएको हेरेर साथी मनोजसँग स्कुटरमा दरबारमार्गबाट सुन्धारा जाँदै गर्दा टुँडिखेल पारी नदेखिएपछि नै धरहरा ढलेको थाहा पाएका थियौँ। धरहरा ढल्न त ढल्यो तर कसरी ढल्यो भन्ने देखाउने न फोटो आयो न भिडियो। भूकम्पको तीन महिना पूरा भएपछि बल्ल एउटा सिसिटिभी भिडियो सार्वजनिक भएको छ जसमा टाढाबाट धरहरा ढलेको देख्न सकिन्छ। सुन्धाराको गोश्वारा हुलाक कार्यालय नजिकै राखिएको सिसिटिभीबाट खिचिएको भिडियोमा यसरी धरहरा ढलेको देखिएको छ।
यो धरहरा ढल्नु एकछिन अगाडिको दृश्य। गोलो घेरामा तपाईँ चराहरु उडिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ।
फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ धरहरा ढल्दैछ। धरहराको बरन्डा तपाईँ गोलो घेरामा देख्न सक्नुहुन्छ।
यसमा तपाईँ धरहराको गजुर नै ढलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ।
धरहरा भूइँमा बज्रिसकेपछि उडेको धुलो।
यी त भए भिडियोबाट निकालिएका फोटो। भिडियो हेर्नुस्-
अझै जुम गरिएको भिडियो हेर्नुस्-
यसको ओरिजिनल सिसिटिभी भिडियो न्युज २४ टिभीका पत्रकार विकास थपलियाले अपलोड गरेका हुन्। हेर्नुस् ओरिजिनल फुटेज
यस्तो थियो धरहरा ढलेपछिको दृश्य
6 thoughts on “यस्तो थियो धरहरा ढलेको डरलाग्दो दृश्य”
धरहरा ढलेको यो ठाउँलाई सुरक्षित राखी यसलाई अवलोकन गर्ने मुख्य क्षेत्र पार्कको रुपमा सजाउनुपर्छ/बनाउनुपर्छ र नया धरहरा अन्यत्र बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा हामीसग हेर्नलायक दुईवटा ठाउ बन्छन् । यदि हामीले पुरानै ठाउमा नया धरहरा बनाउदा घुम्नलायक ठाउ एउटा मात्र रहन्छ । सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस् ।
नेपालको इतिहासको दुखद दिन/ अब फेरि कहिलेही एस्तो दिन देख्नु नपरोस/
आब बन्ने धरहरा आल्मुनियम को बनोस
अल्मुनियम को किन ? फलाम को हुन्न?
धरहरा तिमि फेरि उठने छौ नया रुपमा
नया नेपाल, नया सबिधान, नया धरहरा !
नेपाली पुर्खा को सान तिमि
नेपाली तेसै बिर्षने छैन् …
बिगत मा पनि तिमि पनि ढल्दा हामी ले माथि उठ्येकै हो
फेरि उठाउने छ गोर्खाली हरुले , तिम्रो दिदि को जस्तो तिम्रो हालत हुने छैन !
तिमि फेरि उठने छौ , अझ अग्लो, मजबुत भएर !
कुनै भूकम्प ले केहि नाप्ने छैन अनि !
तेसैले तिमीलाई समबेद भनि नहालु
१-२ वर्ष पर्खन्छु म त !
पर्खनुस पर्खनुस डोर जी | पख्दा पख्दै न निदाउनुस नि |